पढ्ने समय:4मिनेट कहीं यात्रा सधैं अचम्मको छ र हामी यसलाई सुन्दर शहर पत्ता लगाउन के, एक देश वा संस्कृतिका इतिहास हाम्रो बाट धेरै फरक. तथापि, तपाईं सुन्दर ठाउँहरू पत्ता लगाउन घर देखि टाढा जाने छैन. त्यहाँ केहि युरोपियन रेल टुरहरू छन्…
पढ्ने समय:4मिनेट खाना यति गौरवशाली छ, विशेष गरी स्वादिष्ट खाना. यो युरोप बस्ने तपाईं यसलाई लागि धेरै कारण दिन्छ जब यो संग Obsessed हुन त सजिलो छ! खाद्य लागि सबै भन्दा राम्रो शहर युरोप मा हो, हामीलाई विश्वास हामी खाद्य साथै छन्, र तेसैले तिमी…